Madaxweynaha Puntland oo dib ugu laabtay Garoowe (dhegayso/daawo) – Radio Daljir
Madaxweynaha Puntland oo dib ugu laabtay Garoowe (dhegayso/daawo)
Oktoobar 13, 2018 3:45 g 0
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wefti balaadhan oo uu gogaaminayo ayaa maanta 13 Oct 2018 dalka dib ugu soo laabtay, kadib safar shaqo oo uu muddo 10 cisho ah ugu maqnaayeen magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Maxweynaha iyo weftigiisa ayaa garoonka diyaaradaha Garoowe Janaraal Maxamed Abshir waxaa kusoo dhoweeyey Madaxweyne Ku-xigeenka Puntland Eng. Cabdixakiin Xaaji Cabdullaahi Cumar Camey, Guddoomiye Kuxigeenka koowaad iyo labaad ee golaha Wakiilada Puntland, masuuliyiin ka tirsan goleyaasha Dowladda Puntland, saraakiil ka tirsan Madaxtooyada Puntland, masuuliyiin ka tirsan ururada bulshada rayid ka ah, taliska ciidamada Puntland iyo masuuliyiin kale.
Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ugu horayn ka hadlay muhiimadda safarkii ay isaga iyo weftigii uu hogaamianyey ku tageen magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya, Madaxweynaha ayaa sheegay in ay halkaasi kulamo kala duwan kula qaateen beesha caalamka sida safaaradaha Soomaaliya u qaabilsan dalal badan oo adduun ka ah, hay’addo caalami ah, kuwaas oo madaxweynuhu la qaatay kulamo muhiim ah oo looga wadahadlay arrimo khuseeya Puntland iyo Soomaaliya oo dhanba.
“Muddo ku dhaw 10 berri ayaan ku maqnayn magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya, dabcan waxaanu meeshaasi isku soo aragnay beesha caalamka oo qaybo kala duwan leh, safaarado kuwaas oo Soomaaliya u qaabilsan dalal badan , hay’addaha caalamiga ah ‘NGO’ oo Soomaaliya arrimahooda khuseeya, Waxa aan kala hadleyney waxa ay ahayd danta caamka ah ee Soomaaliya iyo gaar ahaan Puntland, hawlo badan oo horumarin ah ayay dalka ka wadaan, safarkaasi wuxu ahaa safar guul ah safar shaqo oo wanaagsan” ayuu yiri Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas.
Ugu danbayn, Madaxweynaha Dowladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali gaas ayaa ciidamada amaanka Puntland, shacabka iyo masuuliyiinta dawladdaba ku bogaadiyey ka shaqaynta amniga, xasiloonida iyo horumarinta Puntland, Madaxweynaha ayaa si gaar ah ciidamada Puntland ugu amaanay shaqada wanaagsan ee ay ka qabteen amaanka iyo difaacidda dalkooda.
Maamulka gobalka Bari oo kaluumaystada uga digay dabaylo xeebaha kuso wajahan (dhegayso/sawiro)
Madaxweyne Gaas “ Xiligeeda ayaan shaacin doonaa in aan ahay musharax Madaxweyne